UKUBUKEZA I-BOX CASINO YE-INTHANETHI NEYESELULA
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-box24 casino
Ibhonasi Lokukwamukela:750% Ibhonasi ne 110 Izikhathi Zokudlala Mahhala
Nakuba i-Box24 Casino inegama elilula kakhulu, ikwazile ukuzakhela idumela elanele ukuba khona isikhathi esingaphezulu kweminyaka eyishumi. Ngesikhathi isungulwa ngo-2009, umhlaba oku-inthanethi wawuyindawo eyehluke kakhulu kuneyanahlanje. Kepha, ikwazile ukuhambisana nobuchwepheshe obusha nokuhlala ingumdlali emhlabeni owandayo wamakhasino aku-inthanethi. Inemidlalo eminingi ongakhetha kuwo njengemishini yokugembula nemidlalo yetafula futhi inikeza abadlali amaphromoshinini amaningi abangawasebenzisa.
Kunosizo lwamakhasimende lwe-24/7 e-Box24, olunikeza abadlali ithuba lokukhetha ukuthi baluthinte nge-imeyili noma ngokuxoxa bukhoma. Kuhlala kukuhle ukubona lokhu, ngoba kufanele kube yinto ejwayelekile embonini kulezi nsuku. I-Box24 Casino iqhathaniseka kanjani namanye amakhasino aku-inthanethi? Qhubeka ufunda ukuze uthole okuninigi.
AMABHONASI OKUKWAMUKELA KA-2020 E-BOX24 CASINO
Ibhonasi Yokubhalisa Ngesikhathi abadlali bebhalisa, banikezwa izikhathi zokudlala ezingu-25
Idiphozithi Yokuqala U-200% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R20,000 nezikhathi zokudlala ezingu-30
Idiphozithi Yesibili U-250% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R25,000 nezikhathi zokudlala ezingu-50
Idiphozithi Yesithathu U-300% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R30,000 nezikhathi zokudlala ezingu-30
AMAKHODI EBHONASI YEDIPHOZITHI ENGEKHO E-BOX24 CASINO
Okwamanje i-Box24 Casino ayinawo amakhodi ebhonasi yediphozithi engekho. Kepha, lokhu akusho ukuthi awekho amawekho amabhonasi ediphozithi engekho. Ngesikhathi abadlali bebhalisa baphiwa izikhathi zokudlala ezingu-25 ezingasetshenziswa kunoma uwuphi umshini wokugembula abawuthandayo.
AMANYE AMAPHROMOSHINI AKHETHEKILE ANIKEZWA I-BOX24 CASINO
Maningi amaphromoshi anikezwa yi-Box24 Casino. Eqinisweni, kunamaphromoshini ansuku zonke anikeza abadlaliamabhonasi kabusha, imiqhudelwano ejwayelekilenamanye amabhonasi amaningi uma ungaphinda udiphozithi. Kusho ukuthi abadlali bangakwazi ukwenyusa imali abayizuzayo uma bedlala nge-Box24. Nasi isifingqo samanye amabhonasi atholakala lapha:
Magnificent Monday Ibhonasi uma ungaphinda udiphozithe ize ifike ku-200%
High-Stakes Tuesday Abadlali bangathola ibhonasi ize ifike ku-300% uma bangaphinda badiphozithe
Wonderful Wednesday Ibhonasi ye-250% yokuthi uphinde wadiphozitha
High-Stakes Thursday Abadlali bangathola ibhonasi ize ifike ku-300% uma bangaohinda badiphozithe
Full House Friday Ibhonasi ye-250% yokuthi uphinde wadiphozitha
INDELA YOKUNGENA NGEMVUME NOKUBHALISA KU-INTHANETHI E-BOX24 CASINO
Ukungena ngemvume e-Box24 Casino kulula kakhulu. Iwebhusayithi ikwenza kube sobala ukuthi kufanele wenzeni ukuze ungene ngemvume. Inkinobho yokungena ngemvume itholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla kuwebhusayithi, mane uchoffoze kule nkinobho bese utshelwa ukuthi ufake imininigwane yakho yokungena ngemvume. Ngemuva kokwenza lokhu uzobe usulungele ukuqala ukudlala.
Ukubhalisa nakho kuwumsebenzi olula kakhulu. Inkinobho yokuqala le nqubo iseceleni kwenkinobho yokungena ngemvume. Mane uyichofoze bese ulandela imiyalo ekuskrini. Ngemuva kokufaka imininingwane yakho, uzobe usulungele ukuqala ukusebenzisa i- Box24.
IMIDLALO YEKHASINO ONGAYIDLALA KU-INTHANETHI E-BOX24 CASINO
I-Box24 Casino inikeza abadlali izinhlobonhlobo zemishini yokugembula yevidiyo abangazidlala. Kunamagama amakhulu embonini yokukhiqiza amasothiwe lapha, kubandakanya u-Betsoft no- Microgaming, okusho ukuthi ungakhetha imidlalo emihle ehlukahlukene. Kunemidlalo engaphezulu kuka-350 yokugembula yevidiyo elungele ukudlalwa.
Amanye amagama emidlalo atholakala lapha abandakanya: i-Wolf Gold, i-Caishen’s Gold ne-Magic Journey. Futhi kutholakala imishini yokuwina isizumbulu semali njenge-Mega Gems ne-Legend of the Nile. Lokhu kunikeza abadlali imidlalo eminingi abangayikhetha ezobagcina benesithakazelo ngokuhamba kwesikhathi.
Kubanthandi bemidlalo yethafula i-Box24 Casino izinhlobonhlobo ezehlukene zemidlalo abangazikhetha. Kunezinhlobonhlobo zemidlalo yonke yetafula atholakala kubadlali. Kubanndakanya i-blackjack, i-roulette, i-keno ne-baccarat. Ngaphezulu kwemidlalo yetafula ejwayelekile kunezinhlobo zemidlalo ezinabadayisi ababukhoma. Lokhu kunikeza umuzwa wokuthi yinto yangempela futhi kwenza imidlalo ijabulelwe ngabadlali abathanda isipiliyoni sekhasino sangempela.
Abadlali bangajabulela isigaba esikhulu se-poker yevidiyo e-Box24 Casino. I-Jacks or Better, i-Joker Poker ne-Deuces Wild angadlalwa lapha. Lena eminye yemidlalo ye-poker yevidiyo edumile etholakala kumakethe futhi kunezinhlonhlobo zemidlalo ongayikhetha.
Ukudlala i-Box24 Casino kuselula kuyafana nokudlala uhlobo oluncane lwewebhusayithi elikukhompyutha. Lenziwe ngendlala yokuthi liyaqinisekisa ukuthi liyagcina ijubane nokuthi alibukeki sengathi linwebekile kumaskrini amancane. Lihlelwe ngendla ecishe ifane newebhusayithi elikukhompyutha, ngakho-ke kulula ukuthola indlela yakho. Futhi lise khona ibha lokusesha ukuze uthole imidlalo yakho oyithandayo.
Liyasebenza kumadivayisi omabili e-Apple ne-Android ngakho-ke iningi lemakethe lingakwazi ukudlala lihamba nge-Box24 Casino. Ngoba imidlalo eminingi isebenzisa i-HTML5 ekhwakheni kwayo kusho nokuthi iningi lemidlalo ekumtapo yemidlalo iyatolakala. Lokhu kunikeza abadlali baseNingizimu Afrika imidlalo engaphezulu kuka-300 abangayijabulela.
NGINGAKWAZI UKUDAWUNILODA I-BOX24 CASINO ESELULENI YAMI?
Ngeshwa, ayikho indlela yokudawuniloda etholakala kubadlali e-Box24 Casino, kodwa njengoba sishilo ngenhla, ukudlala kule khasino ngeselula kulula.
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUKHIPHA IMALI E-BOX24 CASINO
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUDIPHOZITHA IMALI E-BOX24 CASINO
INKAMPANE YE-BOX24 CASINO NEMINININGWANE YOKUXHUMANA
Isungulwe: 2009 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: DeckMedia I-imeyili: [email protected]
Uhlobo Ongakwazi Ukuludawuniloda: Yebo ziwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela iwebhusayithi
UBUHLE NOBUBI BE-BOX24 CASINO
• Miningi imidlalo yokugembula yevidiyo etholakala kubadlali abangayikhetha
• Abadlali bangasebenzisa amarandi
• Kunebhonasi nakuba ungadiphozithi
• Ibhonasi lokukwamukela inkulu kakhulu
• Iwebhusayithi elisefonini lisebenza kahle
• Imidlalo enabadayisi ababukhoma ayiveli ku-Evolution Gaming
• Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ziyabiza kakhulu
Ingabe i-Box24 Casino isemthethweni eNingizimu?
I-Box24 Casino iqondiswa ngokuphelele nguhulumeni wase-Curacao, ngakho-ke kusemthethweni ukudlala eNingizimu Afrika
Ngiyikhipha kanjani imali ku-Box24 Casino?
Yini i-Box24 Casino?
I-Box24 Casino yikhasino ye-inthanethi ephethwe u-Deckmedia. Kunezinhlobonhlobo eziningi zemidlalo ongazikhetha futhi iqondiswa nguhulumeni wase-Curacaoy
Ubani umnikazi we-Box24 Casino
I-Box24 Casino ngeka-Deckmedia futhi iphethwe yibona.
Cha, i-Box24 Casino ayinazo izici zokubheja ezemidlalo
Ingabe i-Box24 Casino inikela ngohlelo lwabantu ababaluleke kakhulu (VIP)?
Kunekilabhu ye-VIP etholakala e-Box24 Casino. Yikilabhu oba yilungu layo ngokumenywa kuphela futhi linikeza abadlali amanye amabhonasi. Ngoba uba yilungu lekilabhu ngokumenywa kuphela, kusho ukuthi imiklomelo enikezwayo iyengeza amaphromoshini anikezwa yi-Box24 Casino. Abadlali banikezwa izinto eziningi ezengeziwe uma bengaba yilunga lekilabhu ye-VIP.
Ziyini izidingo zokubheja e-Box24 Casino ukuze ukhiphe imali?
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ziyabiza e-Box24 Casino. Zithi kufanele ubheje inani lediphozithi
nebhonasi izikhathi ezingu-35. Lokhu kusho ukuthi uma ungadiphozitha u-R200 bese uthola ibhonasi
ka-R400, kuyomele ubheje uR600 izikhathi ezingu 35 ukuze wanelise izidingo zokubheja.